परिवार खुशी राख्न जगारीको सिलसिलामा कुवेत पुगेका सरद परियार उतै अस्ताय ! – Online Khabar 24
परिवार खुशी राख्न जगारीको सिलसिलामा कुवेत पुगेका सरद परियार उतै अस्ताय !
कुवेतमा एक नेपालीको हृ’दयघा’तका कारणका नि’धन भएको छ ।
तनहुँको भिमाद नगरपालिका रिसिङपाटन घर भई रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत गएका सरद परियारको कार्यस्थलमै नि’धन भएको हो ।
कुवेतको केआरएच कम्पनी मार्फत सेक्युरिटीको काम गर्दै आएका परियारको ३ अक्टोवर २०२१ आइतबार बिहान ४ बजे कार्यस्थलमै नि’धन भएको छ । कोठाबाट स-कु’शल काम गर्न कार्यस्थल निस्केका परियार कम्पनीमा पुगेपछि अचा’नक ढ’लेका थिए । त्यस लगत्तै उनको नि’धन भएको स’हकर्मीहरुले बताए ।
मृत’क परियारको हृ’द’यघा’तका कारण ज्यान गएको अस्प’ताल श्रोतले पुष्टि गरेको छ । उनी र’क्तचा’पबाट ग्रसि’त थिए । मृ’तकको घरमा दुइ छोरी, एक छोरा र श्रीमती छन् ।
नेपाली दूतावास कुवेतका द्वितीय सचिव श्रीकृष्ण शिलवालका अनुसार ‘मृतकको श’व आवश्यक का’नुनी प्रक्रि’या पुरा गरेर बुधबार (आज) बेलुका कतार एयरलाइन्स मार्फत नेपाल पठाइन लागिएकोछ ।
मृ’तकको श’व बिहिबार बिहान ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ’ । यो खबरब मयुर पाटीबाट साभार गरियको खबर यस्तै मो’टिक रिपब्लिक अफ कंगोमा डुं’गा दु’र्घ’टनामा कम्तीमा १०० जना मानिसहरूको मृ’ त्यु भएको वा बेप’त्ता भएको अधिकारीहरूले शनिवार बताएका छन् ।
कंगोमा भइरहने सा’मु’द्रिक दु’र्घटनाको यो पछिल्लो शृङ्खला थियो। यहाँका मानिसहरू देशकै ठू’लो कंगो’ नदीमा असु’रक्षित यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
उत्तर पश्चिमी प्रान्त मोंगलाका गभर्न’रका प्रवक्ता नेस्टर मग्बाडोले एएफपीलाई जनाएअनुसार सोमवार देखि मंगलवार रातिसम्म उ’क्त दु’र्घ’टनामा हराइरहेका ६१ जानको श’व निकालिएको छ भने अन्य ६० जना अझै बेप’त्ता रहेको विश्वास गरिएको छ । उक्त दुर्घ’टनामा ३९ जना यात्रुहरू भने जी’वित छन् ।
यात्रुको यकिन संख्या भने जानकारी छैन । यो संख्या भने डुं’गाको क्ष’मताको आधारमा गरिएको अनुमान मात्र हो । यो एक प्रकारको परम्पारागतरूपमा बनाइएको काठको डुंगा हो । प्रवक्ताका अनुसार उक्त दु’र्घ’टना रातिको समयमा ख’राब मौसम वा अत्य’धिक यात्रु’हरूको चापका कारण भएको हुन सक्छ ।
पी’डि’तहरूमा प्रायः प्रान्तीय राजधानी बु’म्बामा यात्रा गर्ने फेरीवाला र विद्यार्थीहरू रहेका छन् । प्रवक्ता मग्बाडोले उ’क्त घ’टनाको थ’प अ’ध्ययन र उद्धा’र कार्य जारी रहेको बताएका छन् । रासस-एएफपी
Prevडि’भोर्स पछि सामन्थाले लेखिन यस्तो भावुक पोस्ट !
nextलकडाउनमा सँगै बस्न दिक्क लागेपछि महिलाले पतिलाई विक्रीमा राखिन !